डिसेम्बरमा आयोजना सक्न निकै कठिन छः भैरहवा विमानस्थलका प्रमुख प्रवेश अधिकारी – Clickmandu
डिसेम्बरमा आयोजना सक्न निकै कठिन छः भैरहवा विमानस्थलका प्रमुख प्रवेश अधिकारी
क्लिकमान्डु २०७६ असोज १३ गते ९:०० मा प्रकाशित
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल आगामी डिसेम्बरसम्ममा सकेर सन् २०२० को मार्च महिनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफूले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बारम्बार समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी आयोजनाको काममा तीव्रता दिएको मन्त्री भट्टराईले दाबी गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा क्लिकमाण्डू डटकमले भैरहवास्थित आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीसँग आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको काम डिसेम्बरमा सकिन्छ भनेर पर्यटनमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ । के छ अहिलेको अवस्था ?
आजका दिनदेखि हामीसँग ३ महिनाको समय छ । यसबीचमा दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्व पनि छन् । त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा हामीसँग काम गर्ने समय निकै कम छ ।
समयमै काम पूरा गर्नका लागि निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सक्न निकै कठीन छ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । मुख्य २ वटा कुरा के भने पहिलो सबै उपकरणहरु आइसकेका छैनन् । केही भन्सारमा आइसकेका छन्, केही उपकरणहरु बाटोमा छन् भने केही उपकरणहरु उतै नै छन् ।
जुन सामानहरु पानी जहाजबाट आउँदैछन ती सामानहरु समयमा ल्याउनका लागि गाह्रो भइरहेको छ । त्यसबाहेक ती सामानहरु भन्सारमा आइसक्दा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । जस्तो कि सामानहरु नयाँ भएकाले कति भन्सार लगाउने भन्ने निर्णय नहुँदा भनेकै समयमा भन्सारबाट सामानहरु आएका छैनन । त्यसबाहेक अहिले मौसमले पनि साथ दिएको छैन । लगातार पानी परिरहेकाले काम गर्न गाह्रो भएको छ ।
कस्ता समानहरु आउँन बाँकी छ ? र, सामानहरु कहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो ?
कम्यूनिकेशन सम्बन्धि उपकरणहरु यूरोप र अमेरिका लगायतका देशबाट ल्याउनुपर्ने हो । त्यसबाहेक केही सामान्य सामानहरु छिमेकी मुलुकबाट आउँदैछन् । ब्यागेज ह्यान्डिलिङ सिस्टमको डीएचएस र लिफ्टको सामानहरु सिंगापुरबाट आउँछ । ती देशबाट आउने सामानहरु कुनै प्रडक्सनको चरणमै छन भने केही आउँदैछन् । त्यसबाहेक चीनबाट ल्याउनुपर्ने केही सामानहरु हामीले ल्याइसकेका छौं । जस्तै, सेन्ट्रल एसी र लाइटको सामानहरु चीनबाट ल्याएर अहिलेकाम भइरहेको छ । अहिले एसीको काम भइरहेको छ । र, धावनमार्गको लाइटको काम पनि अहिले भइरहेको छ ।
तीन महिनाको समयमा काम पूरा गर्न सकिने अवस्था कत्तिको छ ?
यो वर्ष असोजमा आएर मनसुन फेरि सक्रिय भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको हो । अहिले साइटमा गाडी लैजान पनि गाह्रो भइरहेको छ । वर्षाका कारणले असारदेखि नै केही कामहरु रोकिँदै गएको थियो अहिले फेरि रोकिने अवस्था आयो । त्यसबाहेक उपकरणहरु आइपुग्न ढिला हुने हो भने काम तोकिएको समयमा पूरा हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । काम पूरा गर्नका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
हामीलाई कँही कतै एक दिन पनि काममा ढिलाइ भयो भने समयमा काम सक्न गाह्रो हुन्छ । किन भने अहिले हामीसँग एक दिनको पनि अतिरिक्त समय छैन । अहिले उपकरणसँगका सम्बन्धित कामहरु नै बढी भएकाले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग समवन्य भइरहेको छ । सिभिल निर्माणतर्फको काम डिर्पाचरतिरको छाना हाल्ने काम भइरहेको छ ।
र, कार पार्किङको काम पनि बाँकी छ । यसका लागि हामीले मनसुन अगाडि नै झाडी सफा गरेर काम सुरु गरेका थियौं तर त्यतिबेलामा सामग्री नहुँदा काम गर्न सकिएन । पछि मनसुन सुरु भएपछि काम गर्न सकिएन । अहिले त्यही काम बाँकी छ । अहिले कामलाई तीव्रता दिनका लागि दाङदेखि भरतपुरसम्मबाट सामग्रीहरु ल्याएर काम गरिरहेका छौं ।
प्रशासनिक काम गर्नसक्ने अवस्था कहिलेदेखि रहन्छ ?
अहिले धेरै काम सकिएको छ । दशैंसम्ममा हामीले कुर्सी राखेर प्रशासनिक काम सुरु गर्न सक्छौं । तर अन्य प्राविधिक काम अझै बाँकी छ । हाम्रो योजना यो वर्षको अन्तिममा काम सकेर सन् २०२० को पहिलो क्वाटरमा सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका हौं ।
जग्गा मुअब्जामा अहिले कस्तो प्रगति भइरहेको छ ?
आजका दिनसम्ममा ३ अर्ब रुपैयाँ जतिको मुआब्जा बाँकी छ । हामीले एक वर्षको अवधिमा धेरैलाई जग्गाको मुअब्जा दिइसकेका छौं । अहिले लालपूर्जा नहुनेहरुको हकमा केही समय लम्बिएको हो । अहिले आजका दिनमा लालपूर्जा आउँछ भने तत्कालै मुआब्जा दिनका लागि हामीलाई समस्या छैन । त्यसबाहेक अझै हामीलाई अतिरिक्त जमिन अन्तर्गत ४० बिघा जति जमिन आवश्यक छ । त्यस क्षेत्रमा केही आवासीय जग्गा समेत पर्ने भएकाले अहिले त्यसमा समस्या छ । तर अधिकांश जग्गा प्राप्ती र मुअब्जाको समस्या समाधान भइसकेको छ ।
क्यान इन्फोटेकको तयारी पूरा, पेपरलेस टिकटको शुरुवात गरिने
टोखामा ५ वटा उद्यान बन्दै, २ को निर्माण शुरू भयो
माथिल्लो कर्णालीमा मुआब्जा वितरण गर्न जीएमआर अनिच्छुक, ४२६ मध्ये १६४ परिवारले मात्रै पाए